Maalinta: 21-ka July, 2019
Ekrem İmamoglu, Duqa Magaalada ee Magaalada Muqdisho, ayaa sii wadi doona inuu ka dhigo asxaabtiisa ka shaqeeya khabiirada sidii loo ballanqaaday muddada doorashada. Imamoglu, balanqaadkii lagu kordhin lahaa heerka haweenka ee heerka fulinta ayaa sidoo kale la hirgeliyaa .Errem Imamoglu, [More ...]
Turkey Domestic Electric Railway ahayd in ay riixaan badhanka
Turkey mar dambe la soo gelinaya iyadoo hal gacan, network tareenka-xawaaraha sare, dhanka kale, sets tareen korontada guriga, sets tareen oo ka riixay tareenka ee isku-soo saarka gaaska. Boqolleyda tirada dadka maalgashiga ah ee la sameeyay sannadihii ugu dambeeyay ee 15 [More ...]
Mashruuca Mashruuca Dekedda Unye iyo Port Cruise
Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Ordu Mehmet Hilmi Güler wuxuu bilaabay inuu ka shaqeeyo Dekadda Ünye iyo Altınordu Cruise Port kuwaas oo ka mid ah ballamihii doorashada waxayna kamid yihiin mashaariicda aragtida ee Ordu. ciidan [More ...]
Duqa Degmooyinka Magaalada Kayseri Memduh Büyükkılıç, maaddaama dhammaan maalgashiyada gaadiidku ay sii socdaan iyagoo aan ka gaabin, ayuu yidhi. Duqa magaalada Büyükkılıç, Fatih Sultan Mehmet, oo loo yaqaan abaabulan Wadada Warshadaha Mountain [More ...]
Samsun Sivas (Khariidad) Khadka Tareenka Cusbooneysiiyay
Guddoomiye Salih Ayhan iyo duqa magaalada Hilmi Bilgin ayaa aasaasay hogaamiyaha weyn ee Mustafa Kemal Ataturk on 88 ee sanadlaha jidka tareenka ee Samsun-Sivas (Thick), halkaas oo 4 uu siiyay Midowga Yurub sannadkii hore. [More ...]
Dhismaha isbeddelka cusub ee loo yaqaan "Mevlana Junction" si ay u bilaabaan tareenka aagga xeebta ayaa bilaabay. [More ...]
Shiinaha waxay dhistaa caqabad xeeldheer si ay uga ilaaliso shimbiraha ka soo jeeda tareenka
Jiangmen, Guangdong, Shiinaha, ayaa xuddun adag la dhisay si looga hortago buuqa tareenka xawaaraha sare ee saameeya shimbiraha qoyaanka qoyan ee abuuraya deegaannada in ka badan shimbiraha 30. Suuxdinta leexashada xakamaynta laba [More ...]
Magaca Eren Bülbül ayaa la siiyay Bus Stop
Natiijada dabka ayaa ka furmay argagixisada PKK ee magaalada Macka ee Trabzon 2 sano kahor, Magaca Xerada Eren Bülbül ee magaca 15 waxaa la siiyay istaagida baska ee ka soo horjeeda Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha. Magaca Eedeeyaha Eren Bülbül [More ...]
Fiiri Ankara ka timaada Sky by Cable-ga
Bilaha xagaaga, kuwa doonaya inay ku raaxeystaan ​​aragtida shimbiraha ee Keçiören waxay ku ordayaan gaariga fiilada. Turgut Altınok, Duqa Magaalada Keçiören, ayaa yiri, saysinde Thanks to gaariga fiilada, muwaadiniinteenu waxay ku raaxeystaan ​​quruxda Keçiören cirka ka timid. [More ...]
Atatürk iyo Railways
Atatürk iyo Railways: Tareenka ugu horreeya ee keenaya salaanta ka yimaadda Badda Madoow ilaa Badda Mediterranean, '15 bishii Diseembar. Subaxa hore, wuxuu ka lugeeyey Samsun ilaa Mersin markay ahayd 6.00 subaxa hore '. Sanadku wuxuu ahaa 1932; Wadada tareenka ee Samsun Sivas ayaa hada dhamaatay. Wadooyinka tareenka ee gudbinaya dhacdada [More ...]
Saldhigga Tareenka ee Basmane: İzmir-Kasaba (Turgutlu) waa mid ka mid ah khadadka ugu horeeya ee loogu talagalay ka dib Khadadka tareenka ee Boqortooyadii Cusmaaniyiinta. Waxaa fahmay hindisaha Ingiriiska ee dhismaha khadka. Aasaaska xariiqa ayaa ku jira 1664 [More ...]